काठमाडौंको बुद्धनगरमा बबाल ! थुप्रै पक्राउ र घाईते – List Khabar
Home / समाचार / काठमाडौंको बुद्धनगरमा बबाल ! थुप्रै पक्राउ र घाईते
काठमाडौंको बुद्धनगरमा बबाल ! थुप्रै पक्राउ र घाईते
admin January 20, 2022 समाचार Leaveacomment 118 Views
तारा एयरको जहाज खोज्‍न कठिन, खराब मौसमका कारण हेलिकोप्टर जोमसोमै फर्कियो
यिनै हुन् पाइलट जो अहिले बिमान सहित सम्पर्कबिहिन छन्
काठमाडौं, ५ माघ । बानेश्वरस्थित कान्तिपुर इन्टरनेश्नल कलेज, बुद्धनगरमा विद्यार्थी र प्रहरीबीच झडप भएको छ । कोरोना संक्रमित र संक्रमण नभएका विद्यार्थीलाई एकै ठाउँमा राखेर परीक्षा दिन लगाएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रेका विद्यार्थीहरू र प्रहरीबीच झडप भएको हो ।
प्रहरीले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन लाठी चार्ज गरेको थियाे । त्यसै क्रममा केही विद्यार्थी घाइते भएकाे छ । प्रहरीले केही विद्यार्थीलाई नियन्त्रणमा पनि लिएको जानकारी दिए । बिएएलएलबीको चौथो वर्षको परीक्षा दिउँसो १ बजेदेखि ४ बजेसम्म तोकिएको थियो । स्वास्थ्य मापदण्डको न्यूनतम पालना पनि नभएकाले कलेजको गेटमा तालाबनदी गरेका विद्यार्थीहरुकाे भनाई छ ।
एक विद्यार्थीका अनुसार कलेजमा स्यानिटाइजर पनि नराखिएको बताए । मंगलबार हिमालयन ह्वाइट हाउस कलेज, पुतलीसडकमा पनि संक्रमित र संक्रमण नभएको विद्यार्थीलाई सँगै राखेर परीक्षा लिइएको भन्दै विद्यार्थीहरुले परीक्षा नै बहिस्कार गरेका थिए । यतिबेला विभिन्न संकायका स्नातक तह तेस्रो र प्रथम वर्षका परीक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् भने केही सञ्चालनको क्रममा रहेका छन् ।
कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र, शिक्षा मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले कोभिड ओमिक्रोन सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको भन्दै भौतिक उपस्थिति रहने शैक्षिक क्षेत्रका गतिविधिमा रोक लगाएका बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भने धमाधम परीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
कतिपय विद्यार्थी स्वयम् कोरोना सङ्क्रमित भएका बेला विश्वविद्यालयले परीक्षा सञ्चालन गरेर जोखिम बढाएको भन्दै विद्यार्थीहरूले परीक्षा सार्नका लागि माग गरिरहेका छन् ।
Previous रा’ती सुत्ने स’मयमा यस ठाउँमा द’ल्नुहोस् काँ’चो आलु मिल्नेछ नसोचेको फा’इदा
Next यी तरकारीले ओमिक्रोनसँग लड्नमा मद्दत गर्नसक्ने, प्रतिरोधी क्षमता बलियो हुने
दु:खद खबर ! पोखराबाट जोमसोम उडेको तारा एयरको जहाज सम्पर्क विहीन
पोखराबाट जोमसोम उडेको तारा एयरको ९ एन एईटी टि्वनअटर विमान सम्पर्कविहीन भएको छ । १९ …
ऋणबाट मुक्त हुन घरको यो स्थानमा राख्नुहोस मयुरको प्वाँख